Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 11/09/2020)
Kana uchitsvaka yakanakisisa mazambiringa zvitoro mu Europe, hausi chete wakarindira avo isingachinji zvidimbu. Uri zvakare kutora rwendo pasi ndangariro mukoto uye kuongorora nhoroondo. A mazambiringa chitoro kwakafanana fashoni miziyamu, anoratidza tsika guta racho uye nhoroondo. Tinoda kuongorora maguta itsva uye zvinofadza nechitima, uye kuwana akasiyana uye isingachinji zvipfeko ndeimwe nzira kunonakidza yekuzviita. Heano Vintage Best zvitoro mu Europe uye sei kuti ikoko nechitima.
Vintage Best zvitoro mu Europe Paris: Free P Star
Kamwe waita hopped chitima, chichiita wedu wokutanga aizova kusunungura P Star. kana, akafanana nesu, uri anoda zvose Retro, ipapo hapana jaunt kuti fashoni guru Europe achava kwakakwana pasina kumisa inoshamisa runobva Free P Star. Kusiyana nevamwe mazambiringa zvitoro muParis, FREE'P'STAR haadi chete kutengesa French wechipiri-ruoko mbatya. Vanotengesa nguo yechipiri-ruoko achibva kuUnited States zvakare uye dzimwe nguva kunyange zvisikwa zvitsva yaigadzirwa nenguvo dzakasakara. Pane zvakawanda kwazvo competitively akatemerwa mutengo mazambiringa zvipfeko uye nenhumbi kubva 70s hombe’ nepagedhi kusvikira muzana remakore rechi21.
Nepo Paris chingava chimwe chezvinhu zvikuru akashanyira nzvimbo Europe, tinofunga Berlin musha vamwe swankiest mumugwagwa Style mu Europe. Ndiyo hazvishamisi ipapo, kuti Berlin ari brimming nevamwe Vintage Best zvitoro mu Europe. Mumwe wedu pachedu favorite kuva Imbirai Blackbird. Zvinowanikwa iri arty muruwa Neukolln wechipiri-ruoko zororo rinobatanidza yaro eclectic muunganidzwa yokuunganidza nguvo ine Datenroku kuti unyanzvi mune kueche zvokudya. Tinonzwa ichi rinopa unopinza chaiyo uye zvakawanda chikonzero kugara uye chitoro, uye kudya! It ane hwerazuva kuti akagadzira zvidimbu kubva 70s’ kune 90s’ uyewo zvinonaka dzakaitwa nemaoko inobata, Imbirai Blackbird ari mukundi vose Foodie fashionistas!
Akamira kunze sezvo guta guru tsika Catalonia, Barcelona ane chains-garde asi rerunziro aone. Kupa zvivako ano, Ages zvivako, rokusika chili, uye vava kungotaura nezvekudzoka Nightlife. Barcelona ndeimwe pamusoro European kufamba dzokugara. Uye sezvo tiri kupinda chirimo, zviri kuda kuti nakisa vakabatikana. Saka iva nechokwadi iwe bhuku rako chitima matikiti Early musi SaveATrain. Kwete chete ndiye Barcelona kumusha zvimwe Vintage Best zvitoro mu Europe, asi zviri mumwe kupfuura mukurumbira Summer zororo dzokugara. In pakati kudya zvinonaka tapas uye Tanning rimwe zhinji mahombekombe, tora nguva kushanyira uye swing. Izvi Vakamupfekedza mazambiringa Boutique iri munzvimbo trendy Born nzvimbo. Vachinetseka ruoko-vakasarudzwa mugadziri mbatya, zvikwama, chishongo neshangu, ichi snazzy chitoro mumatanda mazambiringa zvipfeko kubva ose ezana remakore rechi20.
Geneva ndiro ndatenda kurota guta kuti rakasiyana marongero uye kwazvo maonero Mont-Blanc. Gomo rakareba mu Europe. The mumaruwa, nzvimbo yakakwana Outdoor mabasa, ndiyo maminitsi mashomanana kubva muguta. Geneva is the best starting point to visit the rest of Siwizarendi nemhaka chakanakisisa mabhazi kubatanidza nechitima.
Ungave uchifunga .... Ndafara Info uye zvose, asi vari kupi mbatya pa, musikana?! ndinoziva, Geneva arege kuzivikanwa somunhu guta kuchengetedza, asi ndicho isu waita sei wava. Kupepeta matombo anokosha akavanzwa semashoko ichi. Nokuti mari zvakasimba vafambi kutarisa kumusoro wavo mazambiringa mutambo usina kutengesa mweya yavo, The Vet 'Shop kuGeneva ndiyo nzira mberi!
Part of Swiss Red Cross, mazambiringa chitoro chiri zvakawanda fashoni orientated pane ayo rudo chitoro dzomuzana. It chete anotengesa Retro zvipfeko ruoko-inounganidzwa kubva iconic pezvitsiga akadai Givenchy uye Celine. saka, kana uri anoda yechipiri-ruoko mufashoni zvetsika, enyika kana kwezvikonzero zvemari, buda The Vet 'Shop. Kwete bedzi yacho vanange kubatsira avo vanoshaya asi uyewo nomufambi pane kudenga-soro mitengo muguta Swiss!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-vintage-stores-europe%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)